AHIANA NY FIHIBOHANA ANDIANY FAHATELO : Fito lavon’ny pesta, mahazo vahana ny famadihana an-tsokosoko
Tsy mbola foana eto Madagasikara ny valanaretina pesta hatramin’izao. Ny firenena mahantra sy an-dalam-pandrosoana no mbola sokajian’izao tontolo izao fa ahitana ity aretina ity sisa. 15 septembre 2021
Efa resaka ifanaovana fotsiny sisa izany ho an’ny Firenena mandroso sy maoderina. Malaky mifindra ary tsy ela dia mamono mahafaty. Mbola mahery lavitra noho ny covid-19 izay natrehin’izao tontolo izao izy ity saingy efa nahitam-panafody ary misy fanefitra. Manodidina ny 7 amin’izao ireo lavon’ny pesta aretin-tratra tamin’ity taona 2021 ity. Mety hitombo anefa io isa io, ary atahorana fa ny pesta indray no ahiana hampiditra an’i Madagasikara anaty hamehana ara-pahasalamana andiany fahatelo, raha tsy misy fandraisana andraikitra hentitra.
Tsy adala, araka izany, ny Ntaolo nanoka-pasana, na nandevina ireny marary voan’ny pesta ireny tamin’ny fasana anirotra na fasana manokana. Tsy natao hokitihina mandrakizay mantsy ny marary voan’ny pesta. Misy ihany anefa ireo manana havana lavon’ny pesta no entanin’ny alahelo sy ny fientanam-po rehefa tonga ny vanim-potoana famadihana ka mikitikitika ireny maty vokatry ny “Yersina pestis » ireny. Vokany, aretina vaovao indray no azo ary manaranaka eo anivon’ny fianakaviana ny trangan’aretina. Ny tena loza, matetika tsy mahafantatra na inona na inona akory ireo fianakaviana fa heveriny ho matin’ny aretina tsotra ny havany ka dia anaovana fomba sy iaretan-tory tahaka ny razana rehetra ihany. Tahaka izay no tranga niseho tao amin’ny kaominina Miandrandra,
Distrikan’Arivonimamo, ny herinandro lasa teo. Narary noho ny aretina tsy fantatra ny lehilahy iray tamin’ny fianakaviana. Vetivety dia namono azy ilay aretina nahazo an’ity farany saingy tsy taitra firy ny fianakaviana. Nanaovana fombafomba sy fiaretan-tory tahaka ny maty rehetra ary nalevina avy eo. Herinandro taorian’io anefa, maty koa ny anabaviny. Teo vao taitra sy nikorapaka ny fianakaviana satria nisesy narary ny iray tanàna. Nitovy avokoa ny fambara sy ny trangan’aretina. Natao ny fitiliana sy ny fanamarinana tany amin’ny “Institut Pasteur de Madagascar” ka voamarina fa pesta aretin-tratra avokoa no nahazo ireto farany.
Raha ny antontan’isa farany voaray aloha hatreto dia olona 7 no namoy ny ainy, 3 tany amin’ny tobim-pahasalamana, 4 teny anivon’ny fiarahamonina noho ity tranga niseho tao Miandrandra, Arivonimamo ity. Efa nanao fanadihadiana mikasika ity raharaha ity moa ny mpitsabo sy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Ny taona 1898 no voalaza fa nahatongavan’ity aretina pesta ity voalohany teto Madagasikara. Sambo avy any India no voalaza fa nitondra tantsambo no niantsona tao amin’ny Morontsirak’i Madagasikara ka namindra izany. Efa nisy mararin’ny pesta tao anatin’io sambo io ary nahitana voalavo matimaty ho azy noho ity aretina ity koa tamin’izany. Ny taona 1921 kosa no fantatra fa tafakatra teto Antananarivo renivohitra ny pesta. “Yersina pestis » no anaran’ilay tsimokaretina mahatonga ny pesta. Araka ny fanadihadiana nataon’ny manam-pahaizana, tsy afaka manaranaka loatra ity tsimokaretina ity any amin’ny tany mafana. Mifanohitra amin’izany kosa izy amin’ny tany mangatsiaka tahaka ny eto afovoan-tany sy ny Faritra Vakinankaratra, Itasy iny. “Ny toerana malomaloka, mandomando, mafanafana dia mahafeno ny fepetra ahafahan’ny tsimokaretina pesta mivelona tsara. Izay no mahatonga ny hoe rehefa vanim-potoanan’ny famadihana dia mirongatra ny pesta eto Madagasikara, indrindra ny eto afovoan-tany”, hoy ny fanazavan’ny Dokotera Fidy Bariniaina, rehefa nanontaniana mikasika ity aretina ity.
Nambarany fa ny fasana, rehefa nandevenana olona iray voamarina fa voan’ny pesta dia tsy tokony hosokafana intsony mandrakizay. Ny antony : afaka mivelona sy manaranaka hatrany ilay tsimokaretina “Yersina pestis » na firy taona na firy taona ao am-pasana. Mainka mahazo vahana aza izy noho ny fahafenoan’ireo fepetra ireo. (Mando lava, mihiboka….). “Efa tokony mametra-panontaniana isika amin’ny zava-misy, ny toerana anaovana famadihana matetika no ipoiran’ny pesta voalohany eto Madagasikara. Ahitana io tranga io avokoa ny afovoan-tany saingy tsy misy na mahalana izany ho an’ny faritra avaratra izay tsy manao famadihana”, hoy ny fanazavany.